सरोकारवालाको नजरमा २०७५ मा वैदेशिक रोजगार क्षेत्र | Nagarik News - Nepal Republic Media
सरोकारवालाको नजरमा २०७५ मा वैदेशिक रोजगार क्षेत्र
काठमाडाैँ - एक पल्ट २०७५ लाई फर्केर हेरौं। खासगरी वैदेशिक रोजगारको नजरबाट। मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एक तिहाइ हिस्सा ओगटेको वैदेशिक रोजगार क्षेत्र २०७५ मा कस्तो रह्यो? वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा के कस्ता घटना घटे? के कस्ता सुधार भए? २०७५ मा समग्र वैदेशिक रोजगार क्षेत्र कसरी अघि बढ्यो? वैदेशिक रोजगारका सरोकारवालाहरु के भन्छन्? थप जानकारीका लागि हेर्नुहोस भिडियो रिपोर्ट :
प्रकाशित: १ वैशाख २०७६ १९:१९ आइतबार
वैदेशिक_रोजगार गोकर्ण_विष्ट मलेसिया_रोजगारी जापान_रोजगारी